PVC Wood-Plastic Imwe Nhanho Extrusion Line - China PVC Wood-Plastic Imwe Nhanho Extrusion Line Mutengesi, Fekitori -Jwell
Imwe-nhanho nzira iri kubvisa iyo yepakati granulation yeiyi link. isa izvo zvakagadzirwa mbichana zvakananga muboka remidziyo, zvine kusanganisa uye extruding zvigadzirwa zvakapedzwa mune imwechete nguva. Mukana nenzira iyi ndewekushanda kwepamusoro, kusanganisa mapurasitiki, uye kwakakosha simba rekuchengetedza, yakaderera mitengo yekugadzira. Parizvino, iko kushandiswa muPV kirasi yeiyo extrusion yePurasitiki-huni zvigadzirwa zvinowana zvakawanda, asi zvinoda zvakawanda pane mbishi zvinhu, zvekudyisa zvishandiso, inotsigira iyo furu uye yekuwedzera michina. Uye zvakare kune yevashandi yakazara tekinoroji danho.
Chishongedzo che screw uye dhiramu yejekiseni kuumbwa